Umndeni waseFairbreeze ukhala ngezethembiso zosizo ezingafezwa - Bayede News
Umndeni wowesifazane owabulawa ngokugencwa ngumzukulu oneminyaka yobudala eli-13 usola uHulumeni waKwaZulu-Natal ngokuwusebenzisa ukufeza izinhloso zawo zemikhankaso yezinsuku ezili-16 zokulwa nokuhlukunyezwa kwezingane nabesifazane njengoba izikhulu zafika zenza izethembiso kodwa okuze kube manje azikaze zifezwe.
Umndeni kamufi uNkk u-Idah Ngcobo waseFairbreeze, eCrescent, oThongathi, uthi namanje awukaze ukuthole ukwelulekwa ngokwengqondo okwathenjiswa iHhovisi likaNdunankulu uSihle Zikalala noMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komphakathi, uNkk uNonhlanhla MaNzimande Khoza.
Lesi sigameko senzeke ngoLwezi nyakenye sekuqale umkhankaso kaHulumeni ochazwe ngenhla odume ngokuthi i-16 Days of Activism Against Women and Children Abuse.
Ngaleso sikhathi kwaNgcobo bavelelwa umshophi wokugencwa kukamama wekhaya nokuyisigameko esenzeka emini kwabha.
Ngalolo suku uNkk uNgcobo wayezihlalele nabazukulu bakhe umyeni wakhe esaphumile esaye ezitolo eyothenga nokwathi uma ebuya wafica umkakhe elele phezu kwedamu legazi, egencwe ekhanda nasebusweni.
Kwenzeka lokhu nje wayesanda kuhlaselwa isifo sohlangothi enyangeni eyodwa edlule.
Indodana yakhe uMnu uDoh Ngcobo ithe kubuhlungu kubo ukuthi uHulumeni wafika emndenini besemanzini wasebenzisa lelo thuba ukuvela kuthelevishini nasemaphephandabeni, bathenjiswa ukuthi bazonikezwa osonhlalakahle abazobaluleka ngokwengqondo. “Sekuphele unyaka singakaze sibabone labo sonhlalakahle okwakuthiwe bazolethwa ekhaya ukuze beluleke izingane nobaba ngokwengqondo. Kumanje kubaba akukadluli okwenzeka usathuka kakhulu, kuyabonakala nje ukuthi umqondo wakhe usaphazamisekile ngakubona. Ngisho ingane eyayineminyaka emithathu ngaleso sikhathi kwenzeka lokhu uma ikhonjiswa isithombe sikagogo wayo iyethuka bese ithi ayimazi njengoba agencwa phambi kwayo. Ngakho kusiphethe kabi ukuthi izikhulu zikaHulumeni zasebenzisa i-16 Days of Activisim ukuza ekhaya maqede azangakufeza ezakuthembisa. Kithi sekufika ukuthi bakwenza lokhu ngoba babefuna ukuvela kumakhamera maqede basidicile. Impela saba nethemba ngesikhathi befika njengoba kwabakhona umama uNonhlanhla Khoza woMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi washo wathi bazothumela ithimba elizoluleka ngokwengqondo. Nehhovisi likaNdunankulu uZikalala nalo kwafika ithimba lakhona lathembisa okufanayo kodwa uphelile manje unyaka asikaze sibone lutho,” kusho uNgcobo.
Uthe umshana wakhe uzivumele yena kuye nasemaphoyiseni nasenkantolo yaseVerulam ukuthi nguye owabulala uninakhulu.
Phambilini kwavela ukuthi uNkk uNgcobo ubulawe abantu abangaziwa abangene esendlini bafike bamgenca ekhanda nasebusweni waze washona.
Ngaleso sikhathi isitatimende esasishicilelwe kwabezindaba sasithi umzukulu wakhe osengumsolwa manje, yena wayephandle eneka izimpahla ocingweni kodwa akuphelanga izinsuku ezingaki icala labheka kuye.
“Imiphumela yegazi ikhombe ukuthi nguye ngempela owenza lokhu, nokho okusalindiwe manje sekuyimphumela ezocacisa ukuthi ngabe umqondo wakhe usebenza ngendlela yini kanti sekuphele unyaka nayo ingabuyi. Odokotela ababili baqinisekisile ukuthi umqondo wakhe usesimeni esikahle okusho ukuthi akaphazamisekile ekhanda. Udokotela wesithathu yena uthe akanaso isiqiniseko sokuthi ngabe umshana isimo sakhe sikhomba ukuphila yini engqondweni nokuyikho lokhu osekudale ukubambezeleka kwecala. Ngikhuluma nawe nje enkantolo uya kabili ngenyanga icala bese lihlehliswa ngoba kulindwe imiphumela yakhe,” kusho uNgcobo.
Uqhube wathi isimo asisesihle emndenini ngoba nonina wengane naye kuyazwela kuye kanti ngapha nomndeni uphatheke kabi ngokubulawa kukaNkk uNgcobo ufuna ubulungiswa.
Uthe ekuqaleni kwakuvele ukuthi uNkk uNgcobo wagencwa umzukulu wakhe ngoba kubangwa umakhalekhukhwini kodwa kuthe ngokuhamba kwesikhathi isitatimende saguqulwa nokwenze babona ukuthi yingoba kubalekelwa ukuthi umshana wabo uzogcina ebekwa icala lokubulala kuhleliwe.
Okhulumela uMphathiswa uMaNzimande Khoza, uMnu uMhlabunzima Memela, uthe bazoxhumana nezikhulu zezenhlalakahle eThekwini ukuze zilandelele ukuthi ngabe ithimba elalijutshiwe ukuba lisize umndeni lagcina lenzenjani.
“Sizothinta umama uSikhakhane onguMqondisi esifundeni iTheku ngoba le ndawo ingaphansi kwakhe. Lokhu kuzosiza ukuba sikwazi ukuthola ukuthi ngabe labo ababejutshwe ukuba bayokweluleka umndeni wakwaNgcobo bagcina bewenzile yini umsebenzi wabo nokuthi uma kungenjalo yini eyaba inkinga. Nokho siyanxusa ukuthi abakwaNgcobo neminye imindeni ezithola ikule nkinga isheshe isukume ithinte uMnyango nobuholi bendawo ukuze ikwazi ukusizakala ngokushesha. Empeleni iwadi newadi linosonhlalakahle abajutshwe kulo ukuba babhekane nezinkinga zomphakathi. Yingakho sikugcizelela ukuthi uma bengafiki ekhaya okusuke kunenkinga kulo, sicela abathintekayo baye kubo babasebenzise ngoba osonhlalakahle babekelwe lokho ezindaweni zemiphakathi,” kusho uMemela.
Uthe iyabadumaza indaba yokuthi umndeni wakwaNgcobo awukaze uluthole usizo oludigayo ngoba uMphathiswa uzimisele ukuba lo mndeni uthole usizo oluwufanele ukuze udlule kulesi simo obhekene naso.
UMemela uthathe nezinombolo zikaNgcobo wathembisa ukuthi bazolulandela ngokushesha udaba lwabo.
IHhovisi likaNdunankulu nalo lithintiwe ukuze liphawule kodwa uMnu uLennox Mabaso noyinhloko yezokuXhumana kuHulumeni ucele ukuba abuye abuye ngoba ubematasa emhlanganweni.
nguCelani Sikhakhane Nov 6, 2020